Ciidanka Galmudug iyo Puntland oo si rasmi ah oo lakala Qaaday +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ciidanka Galmudug iyo Puntland oo si rasmi ah oo lakala Qaaday +Sawirro
Ciidamadii maamulada Puntland iyo Galmudug ee isku hor fadhiyey galbeedka magaalada Gaalkacyo ayaa goor dhow oo galabta ah si rasmi ah loo kala qaaday sida wararka halkaas naga soo gaaraya ay sheegayaan.
Kala qaadida ciidamadan ayaa waxaa goob joog ka ahaa raisul wasaaraha Somalia, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo madaxda maaaulada Puntland iyo Galmudug iyo guddigii labada dhinac ka koobnaa ee loo xilsaaray nabadeynta Gaalkacyo.
Masuuliyiintan ayaa kulan ku yeeshay goobtii laga qaaday ciidamadii is hor fadhiyey ee Galbeedka Magaalada Gaalkacyo.
Kulanka ayaa looga hadlay dardar galinta waxyaabaha dhiman oo ay ka mid yihiin dib u soo celinta dadkii magaalada ka barakacay iyo in Calaamad loo sameeyo Ciidamada labada Maamul dagaalo kale looga baaqsado.
Ra’isul Wasaare Sharmaarke ayaa ugu baaqay Madaxweyneyaasha Maamulada Puntland iyo Galmudug in ay ka shaqeeyaan dhameystirka waxyaabaha harsan isla markaana ay Muhiim tahay in dadka ku wada nool Gobolka Mudug ay Nabad ku noolaadaan.
C/raxmaan Odowaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalia ayaa isna talaabo horay loo qaaday ku tilmaamay kala qaadida Ciidamada Labada maamul isagoo maamulada iyo shacabka Gaalkacyo ugu baaqay iney ilaashadaan nabada, kana fogaadaan wixii xasarad abuuri kara.
Ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena wey ku dhaawacmeen dagaalo soo laalaabtay oo ciidamada labada maamul ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo, iyadoo ay ku barakaceen inta badan shacabkii ku noolaa magaladaas.